IJupiter kwiSagittarius: Iyichaphazela njani iNhlanhla yakho kunye noBuntu bakho - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IJupiter kwiSagittarius: Iyichaphazela njani iNhlanhla yakho kunye noBuntu bakho
IJupiter kwiSagittarius: Iyichaphazela njani iNhlanhla yakho kunye noBuntu bakho
IJupiter yiplanethi elawulayo yeSagittarius ngoko unokucinga ukuba abantu abanohambo lweplanethi kwitshathi yabo yokuzalwa bafumana ithuba lokuzonwabisa nokuzonwabisa kabini.
Ungayichazanga eyokuba abo bazalwe ngexesha lokuhamba okunje abazi mida xa kufikwa kuthando kwaye banethamsanqa elihle koku.
Bacinga kwihlabathi jikelele kwaye bayathanda ukuhamba okanye ukudibana nabantu abavela kwiikona ezahlukeneyo zehlabathi. Aba bantu ngabafundi bobomi kuba banomdla kwaye bayayithanda yonke into enxulumene nenkolo okanye ifilosofi.
Ngaphezu koku, ngoosomashishini abalungileyo abanombono omkhulu kwaye aboyiki ukuthatha umngcipheko. Kodwa baya kufuna ukufunda ngakumbi ngaphambi kokuzibandakanya kwinto ethile.
indlela yokulukuhla i-scorpio
IJupiter esebenzayo iya kubanceda babe nombono, kodwa bangabi ngabaphathi abalungileyo ukuze mhlawumbi ukuziqhelanisa nokuzimela kwabo kuya kusebenza ngakumbi kule meko.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka bafunde ukusebenza ngokubambisana ngezifundo ezithile ezibuhlungu. Mhlawumbi ukuzithemba kwabo kunye nolwazelelo lwabo luya kugqibela. Banethamsanqa abantu abahlala bemi ngeenyawo, emva kwayo yonke loo nto.
IJupiter kwiSagittarius ngamafutshane:
Uhlobo: Unethamsanqa kwaye awunamda
Iimpawu eziphezulu: Ukuba nethemba, ukuthanda, ukufuna inyaniso
Ubuthathaka: Yithambekele ekuvaleni kwaye ngamanye amaxesha i-naïve
Ingcebiso: Chaneli amandla aqinisekileyo ngokuhlala kude neshishini labanye.
Abantu abadumileyo: UAmy Winehouse, uMarlon Brando, uJared Leto, uMila Kunis, uBen Affleck.
IJupiter Sagittarians yimimoya yasimahla ehlala icinga ngekamva kwaye ibonakala ngathi ithatha ithamsanqa kuyo nantoni na. Banomdla wokufunda izinto ezintsha, kungoko kunokwenzeka ukuba baya kuba bexakekile ngalo lonke ixesha.
Akunakukhathalela ukuba ingaba lulwimi olutsha okanye ubuchule bokucamngca, baya kufuna ukwandisa ingqondo yabo kwaye babone umhlaba ngendlela eyahlukileyo. Aba bantu bahlala bekulungele ukuhamba kunye nokuthatha umhlaba.
Emva kwayo yonke loo nto, iSagittarius nguMzobi wezodiac. Abantu abanolu luvo lweplanethi kwitshathi yabo yendalo bahlala bejonge ukuthatha imiceli mngeni emitsha.
Ziya kuhlala zilapho kukho amava amatsha kunye nezifundo oza kuzifunda. Bonke ubutyebi buya kufunyanwa ngabo kuba le yeyona njongo yabo kunye nomvuzo wabo ofunwayo.
ungaxela njani ukuba indoda ebukeleyo iyakopa
Ukuthembela, baya kuhlala bethatha umngcipheko kwaye bangene kwindawo engaziwayo egcwele ulonwabo. Bayayiqonda ukuba bayazenzela ithamsanqa kwaye okukhona bethatha inxaxheba kumdlalo, kokukhona banokufumana.
Aba bemi bangabantu abafuna, abo bafuna ukufikelela kubuthixo kwaye baqonde imigaqo enzulu. Inkolo kunye nefilosofi ziya kuba yindlela yabo yokufumana iNyaniso eqinisekileyo.
Kodwa iJupiter Sagittarians kufuneka ibuze kwaye ivule ukuba bafuna ukusebenza kakuhle ebomini. Xa baya kucinga ukuba bayifumene inyaniso, baya kuzenza amalungisa kwaye babambelele.
Ukuzithoba okanye ukuziva ubhetele kunokubanceda nangayiphi na indlela. Banokukuphepha konke oku ngokugcina iintliziyo neengqondo zabo zivulekile. Ukuqonda ukuba kuhlala kukho okungakumbi kokwazi ukuba iya kuba lusindiso lwabo.
Bafuna ukuhamba ngaphezulu, ukudibana nabantu abaninzi kangangoko ukuba bafuna ukubona umfanekiso omkhulu kunye nokwenza ulwazi ngcono.
Nangona kunjalo, kufuneka bagcine kude nokugqitha. IJupiter kwiSagittarius sisikhundla esenza ukuba bacinge ukuba zange babenento entle kakhulu de bazisebenzise zonke izixhobo zabo.
Kungenxa yoko kunokuba nzima kubo ukufumana iziko labo amaxesha ngamaxesha. Kuyinyani ukuba namandla abo okuphupha amakhulu kuyanceda, kodwa ukumodareyitha kuyimfuneko ukuba bafuna ukugcina ubudlelwane babo kwaye baphile qete.
Ngenxa yokuba bekhulisa kwaye beguquka, baya kutsala ithamsanqa njengamazibuthe. Ukuba bayakholelwa kwiziqu zabo kwaye babeke ntoni ezingqondweni zabo, bayakhuthaza abantu abaninzi.
Ngehlombe, iJupiter Sagittarians kufuneka icofe ngakumbi kumandla abo okufunda nokufundisa izinto ezintsha, njengoko bebeya kuba bakhulu kwimisebenzi enento yokwenza nemfundo, ukupapasha okanye ukuhamba.
Xa abanye bengavumelani neenkolelo zabo kunye nezimvo zabo, bayacaphuka. Aba bantu baya kwenza awabo amathuba kwaye bayakwazi ukuqikelela ukuba kuya kwenzeka ntoni ngokulandelayo kuba banokuthatha ukungxama kokholo kwaye baphumelele.
Abemi beJupiter Sagittarius kufuneka bacelwe umngeni ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni kuba bakhuphisana kakuhle. Kungenxa yoko bebalasele kwezemidlalo nabo.
NgeJupiter ekhaya ngophawu lwabo, banethamsanqa ngokwendalo. Kuya kuhlala kubonakala ngathi abanakwenza nto iphosakeleyo, kuninzi ekucaphukiseni kwabagxeki babo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iJupiter isekhaya eSagittarius, ke iimpembelelo zalo mhlaba kunye nomqondiso ziya kutyhileka kakuhle kubantu abazalwa benolu hambo oluthile kwitshathi yabo yokuzalwa.
Xa kufikwa ekuhambeni, aba bafana baziingcibi zayo: umgama omkhulu kunye nokuzenzekelayo ekufuneka bezise ngako, kulunge kubo.
Musa ukulindela ukuba banganyaniseki, baya kukuxelela inyani nokuba ingavakala kabuhlungu kangakanani. Abakhohlakele, abanako nje ukuzibamba banganyaniseki.
Ukuya kuthi ga ngokufika, iiJupiter Sagittarians ziya kuhlala zingena zithathe imiceli mngeni emitsha kwaye zizonwabele lonke uhlobo lwamava.
Bayavana nawo wonke umntu kwaye ukuba baya kuvuleleka kuyo nantoni na, ithamsanqa liya kubalandela naphina. Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi aba bantu abanankathalo kwihlabathi.
Kunjengokuba bafuna ukwenza ubomi babanye abantu bube ngcono, befundisa yonke ifilosofi kunye neengcinga zenkolo abazifundileyo. Akululanga ukubenza batshintshe ingqondo malunga neenkolelo zabo.
Xa umntu eya kuvumelana nabo, baya kuba ngabona bonwabileyo. Ngenxa yokuba bachitha imali eninzi, bakwangabenzi bemali abalungileyo. Bahlala bephumelela ukuba akufuneki balandele inkqubo yesiqhelo.
I-Flexible kunye nengqondo evulekileyo, iJupiter Sagittarians inokwamkela ezinye izimvo zabantu. Bayakukhula ngakumbi ukuba bayamamela kwaye babaxhase abantu ebomini babo.
Babona imfundo kunye nokuhamba njengethuba lokuba babe ngcono. Kodwa ukuhlala uvulekile kuphela kwento eya kubazisela ithamsanqa. Ukuba baya kushumayela kakhulu, ngekhe baphinde bakhule kakuhle, kwaye ithamsanqa labo liya kubafulathela.
IJupiter kwindoda yeSagittarius
Indoda kaJupiter Sagittarius inesisa kakhulu kuba uJupiter umenza ngale ndlela. Uya kugcina imali kwaye abanikele, okanye ivolontiya. Iplanethi efanayo iyamnceda ukuba athembe ukuba izinto zizakulunga nokuba zithini.
Inyaniso yokuba akanaloyiko ebusweni obungaziwayo imenza abe mhle kakhulu. Kodwa kufuneka atyale ixesha elininzi kubudlelwane bakhe kwaye abe nombulelo ngakumbi ukuba ufuna ukugcina abantu besondele.
Ukuba nesisa kunye nokuphendula kumsa ngothando kuya kumnceda akhe unxibelelwano olomeleleyo nabanye, ngakumbi xa uJupiter eza kuhamba ngomqondiso wakhe.
i-virgo man kunye ne-scorpio umtshato womfazi
Uya kudlala isini sakhe kakuhle, kwaye isini sakhe singene nzulu. Unokhemistri omkhulu kuninzi lwabasetyhini, ke banokulindela ubusuku obunomphunga kunye naye. Ngqo, uyakuthetha okusengqondweni yakhe kwaye enze amanenekazi amaninzi abe neentloni.
Ngelixa aba bantu banokubonakala ngathi bayayazi yonke into, abanalo kwaphela ikratshi. Ngokwenyani bangabafundi bobomi abathanda ukwenza abahlobo abatsha.
Cinga ngetolo lika-Archer kwaye uya kuba nakho ukubona indlela ezimisele kwaye ekhuthaze ngayo iJupiter Sagittarius.
Ukuba uya kuba nomntu othe tye njengaye, uya konwaba kakhulu. Ukuba uthandana naye, yenza nje intshukumo xa uJupiter ehamba ngeSagittarius.
UJupiter kumfazi weSagittarius
Umfazi oneJupiter kwi-Sagittarius uya kubonisa ububele beplanethi. Inyaniso yokuba uJupiter ulawula lo mqondiso iya kumenza azive enethamsanqa nanini na xa iplanethi ihamba ngophawu lwakhe.
Uya kufumana uthando kunye nokwoneliseka ngala maxesha. Ungoyena uvuya xa ekwazi ukuveza izimvo zakhe. Ilungu elibalulekileyo ekuhlaleni kwakhe, uya kuvusa umdla wakhe wonke umntu ngokuba nesisa kakhulu.
Uya kuvolontiya kuzo zonke iintlobo zezizathu kuba uya kufuna ukulwa nokulungileyo. Impembelelo yeSagittarius iyamnceda ukuba abe ngumxazululi weengxaki ongcono. Eli nenekazi liya kuzithemba qho xa lijongana namaxesha anzima ebomini balo.
Ngamafutshane, khumbula ukuba amadoda avulwe nguye, abafazi bayamthanda. Kuba uthanda ukuphatha, abantu abaninzi baya kufuna ukuba sebhedini yakhe.
Akangoqhushumbo kuphela xa esenza uthando, uyazithemba nangayiphi na indlela ngenxa yempembelelo kaJupiter. Isisa esinye seplanethi esiya kwenza ukuba sonwabe ngakumbi kwaye kungenzeki ukuba silibale.
Phonononga ukuQhubeka nokuTshintshwa kweMihlaba kuMqondiso ngamnye weZodiac
Uhambo lweNyanga ♀︎ Iihambo zeVenus ♂︎ Uhambo lukaMars
♄ Uhambo lweSaturn Uhambo lweMercury Trans IiJupiter Transits
Uhambo lweUranus ♇ Uhambo lwePluto Uhambo lweNeptune
IScorpio Ox: Abaphandi abaNenkani beTshayina yeNtshona Zodiac
NgoFebruwari 15 I-Zodiac yi-Aquarius-Ubuntu obuPheleleyo beHoroscope
Inamba kunye nenkawu zithanda ukuhambelana
venus kwiscorpio indoda ebhedini
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 21
Julayi 20 ukuhambelana kweempawu zodiac
indlela yokulukuhla indoda ye capricorn
Wazalwa ngo-2007 zodiac Chinese